Madaxweynaha Liberia oo caleemo saarkiisa ku martiqaaday Wenger - Wargane News
Home Somali News Madaxweynaha Liberia oo caleemo saarkiisa ku martiqaaday Wenger
“Nolsha ninkan waa filim xaqiiqo ah. Waa wax aan la rumaysan karin. Filim cajiib ah ayaana laga matali karaa,” ayuu BBC-da ku yiri Wenger oo ashqaraarsan.
“Waxaan xasuustaa markii koobaad ee aan ku arkay Monaco, kayd ayaa ka muuqatay, qofna muusan aqoonin, ma jirin qof qiimeeyay heerka uu ciyaarta ka joogo, haddna wuxuu noqday ciyaartoygii ugu wanaagsanaa adduunka sannadkii 1995, haddana in uu madaxweyne ka noqdo dalkiisa waa arrin aan la aamini karin”.
“George ayaan dalkiisa u raacay markii uu dagaalku ka socday Liberia, waxaana arkay dhibaatada dalka soo gaartay, arrintaas ayaana dalkiisa ka sii socotay, dalkiisa iyo dadkiisana wuu jeclaa,” ayuu yiri Wenger.
“Markaan xasuustayda dib u celiyo waxaan arkay isaga oo ka ooyaya dagaalka Liberia ka socda, marka waa arrin farxad leh, waxaana u rajaynayaa madaxweynenimo wanaagsan .. ninkan wuxuu tusaale u yahay qof kaste oo maanta ciyaartooy ah”.
Arrintinta muragada leh ayaase ah in hawsha Horyaalka Ingiriiska ee u taalla awgeed uu u muuqdo mid aan ka qaybgali doonin caleemo saarka – inkastoo ay macquultahay haddii uu safarkiisa soo koobo.
“Waxaan filayaa mashquul ayaan noqon doonaa, balse haddii ciyaaraha la iga ganaaxo, wakhti aan caleemasaarka ku aado ayaan heli doonaa,” ayuu yiri Wenger oo wajahaya baaritaan anshax la xiriira oo uu wado xiriirka kubadda ee Ingiriiska (FA), isaga oo loo haysto hadal uu ka sheegay garsooreyaasha.